Dharka ragga gacanta labaad - hissenglobal.com
Ragga gacanta Labaad Dharka
Dharka ragga ee Hissen Global ma buuxiyo baahida, sababta ugu weynna waa sababta oo ah tayada dharka ragga ee hissenglobal ee la isticmaalo waa mid joogto ah oo Hissen Global macaamiishu waxay haystaan ​​lacag ay ku kasbadaan oo ku guulaysta iibsiyada soo noqnoqda. Waxaa jira in ka badan 20 qaybood oo ah dharka ragga ee la isticmaalay, sida loo isticmaalo funaanado ragga, Jiinis ragga ah oo la isticmaalay, toddobo surwaal oo ragga ah oo ragga ah, haddii aad raadinayso alaab-qeybiye dharka ragga ah, markaa fadlan kaalay oo nala soo xiriir, ku soo dhawoow inaad soo booqato warshadda annagana gacan ayaan ku siin doonnaa. Ku soo dhawoow iskaashi cunay!
Haddii aad rabto inaad iibsato tayada la isticmaalay dharka ragga
la xiriir hada
loo isticmaalo Sarrayaasha Ragga
Surwaalka Ragga ee la Isticmaalay
Shaadhka ragga ee la isticmaalay
Shaadhka ragga ee la isticmaalo
Jaakada Ragga La Isticmaalay
Surwaalka Gaaban ee Asalka ah ee la isticmaalay
Dharka ragga oo badan >>
Waa maxay sababta ay u dooratay dharka ragga ee la isticmaalo ee Hissen Global
Alaab cayriin oo tayo sare leh
Shiinaha ayaa leh ragga ugu badan adduunka, tiradan dadku waa 71.9 million, dad aad u tiro badan ayaa hubiya sahayda alaabta ceeriin ee Haisen's dharka ragga ee la isticmaalo, waxaan iibsanaa ku dhawaad 1,000 tan oo dharka ragga ah ee la isticmaalay Bil kasta, waxaanu ku samayn doonaa kormeer walxaha soo socda qayb kasta oo alaabta ceeriin ah. Waxaan hubineynaa in boqolleyda dharka ragga ee calaamadeysan ee qeyb kasta ay yihiin aan ka yarayn 5%, iyo in boqolleyda alaabta A ee dufcad kasta ay tahay aan ka yarayn 98%.
Hissen Global wuu dhammaaday qaybaha 30 oo ah dharka ragga ee la isticmaalay sida funaanadaha ragga ee la isticmaalay, surwaalka suufka ee ragga, surwaal jeebab badan loo isticmaalo, shaadhka ragga ee la isticmaalay, funaanadaha ragga ee la isticmaalay, iwm. Noocyada kala duwan ayaa kuu sahlaya inaad doorato. Waxa kale oo aad si fiican u dooran kartaa qaybaha aad lacag ka samaynayso, taas oo kuu fududayn doonta inaad balaadhiso suuqaaga.
Dharkayaga la isticmaalay ee ragga aad buu u iibiyaa, iyadoo ku xidhan tayada tayadayada. waxaan xakameyneynaa tirada shaararka gaagaaban ee ragga oo leh qoraal Shiinees ah oo lagu xisaabtamayo. Waxaan dammaanad qaadaynaa inay jiraan godad la'aan, wasakh la'aan, malaha caaryada, ma jiraan qaybo maqan (sida jeebab badan oo gaaban) isticmaalka xad dhaafka ah, iwm ee loo isticmaalo dharka ragga. Waxaan sidoo kale dammaanad qaadnay boqolleyda dharka ragga ee calaamadeysan. U fududaynta macaamiisha inay lacag sameeyaan.
Waxaan haynaa nidaam adeeg iib ka dib oo dhamaystiran, laga bilaabo habaynta astaanta, kala-soocidda alaabta, hubinta tayada, miisaamidda, baakaynta, rarista, hab kastaa wuu doonaa gwarbixin soo saar oo kuu soo dir, waxaan sidoo kale ku siin karnaa kala soocida si toos ah, kormeer tayo leh oo toos ah, iyo wixii la mid ah adeegga tooska ah. U ogolow macaamiishu inayna wax welwel ah yeelan.
Ma rabtaa inaad si toos ah u daawato xakamaynta tayadayada?
Dhammaanteen waan ognahay in weel isku mid ah, xamuulkuna uu isku mid yahay, haddii weelku ka kooban yahay alaabo badan, xamuulkaagu wuxuu noqon doonaa mid aad u qiimo badan, sayidkeenna rarka weelka ayaa kaa caawin kara inaad gaarto gargaar waxaad ku shubaysaa 10% dheeraad ah, 40 cagood weel waxa ku jiri kara 28,600kg, 20 cagood weel waxa ku jiri kara 14,000kg.
- Dharka la isticmaalo &kabaha la isticmaalay & bacaha la isticmaalay-
Sida dhoofinta dharka sare ee la isticmaalo, Hissen Global waxa ay ka faa'iidaysteen alaab-qeybiyeyaal kale oo badan, summadayada Hissen Global waxaa laga diiwaan geliyey dalal badan oo Afrikaan ah, dharkayaga la isticmaalay waxaa lagu iibiyaa in ka badan 60 waddan, ku dhawaad ​​100 milyan oo qof ayaa xirtay Hissenglobal la soocay oo la isticmaalay. Waxaan leenahay 2 warshadood oo kala soocida oo ku yaal magaalooyinka ugu horumarsan Shiinaha, waxaana ku leenahay in ka badan 400 oo shaqaale ah oo leh shaqaale iibiye xirfad leh oo ku hadla Ingiriisiga, Faransiiska, Isbaanishka iyo luqadaha kale ee adeeggaaga. Hadafkayagu waa inaan noqono shirkadda ugu wayn ee dharka la isticmaalo ee aduunka. Dharkeenii hore ha gaadhaan dad badan oo Afrikaan ah!
"Tayada labiska gacan labaad ee Hissen Global waa mid aad u deggan. Waxay ka dhigi karaan funaanado ay ku jiraan xarfo Shiinees ah oo yar oo ka soo muuqda baallaha."
"Waxaan la dhacay tayada dharka ragga ee Hissen Global. Si dhib ah uma heli karo wax dalool ah, wasakh, caariyaysi, libdhaysa ama dhibaatooyin kale oo tayo leh."
"Hissen Global wuxuu leeyahay qiimaha maraakiibta ugu hooseeya ee aan abid arko. Aad u fiican"
La tasho khabiirkaaga dhoofinta dharka la isticmaalay
Waxaan kaa caawineynaa inaad iska ilaaliso khadadka oo aad gaarsiiso tayada iyo qiimaha aad u baahan tahay.